Uye vamwe netiquette ari netsanangudzo Apg29
Christer Åberg somunhu emoji.
Nakisisa sezvo zvinganzwika, pane zvishoma (Note: vashoma) vanogara vanozviwana vari fashoni tungamidzana kuti kumbova sokuti change.
Uye vamwe netiquette ari netsanangudzo Apg29.
1️⃣ Dzimwe nguva zvakanaka vanhu vanouya loggerheads ari mashoko. zano rangu kuti haana kutanga kukurukura uye kuenda kundorwa nomumwe. Iwe nyora pfungwa dzenyu, zvino zvakanaka.
Ivo kugarisana nzira uchida kubatwa, zvikasadaro hazvinakidzi kushandiswa kuti nyora chinhu.
2️⃣ Do chinhu kukodzera nemashoko, unogona kundiudza. Comments kuti mubvunzo deletade mhinduro nguva dzose mubayiro nokutanga deletade. Apg29 haana anotsanangura nei mhinduro iri deletad. Izvi zvinofanira kuva kuzvipira kunzwisisa.
3️⃣ Kana uchida kutsoropodza Apg29 kana nhaurirano pamusoro pangu (Christer Åberg), unogona kuzviita kumwe, asi kwete pano.
4️⃣ Kana wanga yakabvunzwa mwero tungamidzana uye anoda kuuya shure uye mhinduro, saka ndiko chete kwamuri kuchengetedza zvakanaka Netiquette 🙂.
5️⃣ pakuwanza zvakaipa dzidziso Chokwadi havabvumirwi. Vatsinhiri vari kuita izvi zviri deletade uye ambofanobata mune mwero tungamidzana.
6️⃣ Vatsinhiri anongoda anoenda kundorwa chii makanyorwei nyaya anogona kuita kumwe, asi kwete pano.
7️⃣ Chokwadi, hapana kuitwa zviri pamutemo raibva.
❗️ Kunoshamisa sezvo zvinganzwika, pane zvishoma (Note: vashoma) vanogara vanozviwana vari fashoni tungamidzana kuti kumbova sokuti change.
❤️ Asi ndatenda imi mose muri zvakanaka tsika uye anonyora mhinduro here akanaka ane inzwi rudo uye ruponeso meso! Imi akasikwa zvakanakisa ekunze musi Apg29 akaidzikira munhuwi anoshamisa!
✔️ mitemo aya Chokwadi bönesidan zvakare. Asi ziva kuti pane bönesida uye hapana nehurukuro peji kana "Printer peji". Chinhu haisi munyengetero kana tacksägelseämnen deletas.
✔️ kwete ratidza vanhu zita zita ravo rizere, uye izvi zvinoshanda kunyora kwako.
✔️ Klagoböner, kutsiva minyengetero uye hatböner iri pachena kwete welcome.
✔️ Ndapota vane ruponeso paunomurega kutuma mu bönämnen.
Kana uine chinhu kutaura pamusoro anoisa nenhungamiro yechiKristu saka tapota nyorera isu e-mail muverengi! Email inofanira kuva mashoko dzinenge 300 asi chinonyanya kudiwa 500 kana kupfuura. Anopupura nezvaJesu, ruponeso, rubhabhatidzo, rubhabhatidzo muMweya, minyengetero akapindura kufamba naJesu. Zvakafanira munguva ino yatiri kurarama!
Unogona mae-mail zvakananga kuna Apg29 kana kudhinda muverengi e-mail iri muchimiro .
Yeuka kuti muverengi na uye mhinduro vane zvavanofunga. Kana zvakanyorwa chinhu pfungwa kuti handirevi kugoverana, imi hamugoni ini mhosva nayo! "Kunzwa uine mhosva nokuwadzana" ( sangano chikwereti ) haana kuiswawo pano!
Izvi zvinoshandawo nyaya uye mavhidhiyo asina neni, kana kana ini kubvunzurudza munhu mandaishandira kuti handina zvavakagoverwa mafungiro pamwe.
Asi sei Ndinofara kuti iwe nevamwe vazhinji vanoshanyira Blog rangu nzvimbo Apg29 uye Kutarira dzangu dzeredhiyo mhenyu siyana!
Kudziudza hunofadza nevamwe vakawanda zvokuti kuitwa nomunhu zvinoita!
Mwari akuropafadzei zvikuru uye kuva chaizvoizvo zvakanaka!
Vecka 23, söndag 13 juni 2021 kl. 18:37